Wakiilo ka socda beesha caalamka oo DF kula shiray Muqdisho kalana hadlay.... - Caasimada Online
Home Warar Wakiilo ka socda beesha caalamka oo DF kula shiray Muqdisho kalana hadlay….
Wakiilo ka socda beesha caalamka oo DF kula shiray Muqdisho kalana hadlay….
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa Maanta oo Talaada ah ka furmay Magaalada Muqdisho, Shir Bil-laha ah oo u dhexeeya Dowladda Soomaaliya iyo Beesha Caalamka SDRF, kaas oo looga hadlayo mashaariicda horumarineed ee Soomaaliya.
Shirkan oo uu Guddoominayay Ra’iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Khadar, ayaa waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah xubnaha Golaha Wasiirrada XF, wakiillo ka socday Dowlad Goboleedyada , Gobolka Banaadir iyo xubno ka socda Beesha Caalamka .
Shirka waxaa warbixin looga dhageystay Wakiillada matalayay Dowladda Soomaaliya iyo xubno ka socday maamul Goboleedyada, Gobolka Banaadir, iyo sidoo kale xubnaha Beesha Caalamka.
Dowladda Soomaaliya ayaa waxay halkaasi kusoo bandhigtay tubaha Afarta ah ee kala ah siyaasadda loo dhanyahay, amniga iyo cadaaladda, arrimaha Bulshada ,dhaqaalaha iyo hormarka la gaaray Sanadkaan dhamaadka ah ee 2018 ka.
“Shirkaan waa shir Bil-le ah, waxaana Maanta shir Guddoominayay Ra,isul wasaare ku xigeenka Dalka waxaa diiradda lagu saaray horumarkii la gaaray Sanadka 2018 ka, waxaan soo bandhignay tubaha Afarta ah ee saldhigga u ah shaqada Xukuumadda, sida tubta amniga iyo cadaaladda tubta siyaasada loo dhanyahay tubta dhaqaalaha iyo tubta arrimaha bulshada muhiimad weyn ayuu u lahaa shirkaani Soomaaliya”ayuu yiri Wasiirka Cadaaladda XF Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji.
Dhowr Jeer oo hore ayaa sidaan oo kale loo qabtay Shirkaan SDRf ee looga hadlo mashaariicda horumarineed ee Dalka ka socota, Dowladda Soomaaliya ayaana hadda u wajahaysa si ka duwan Bilihii tagay mashaariicda Soomaaliya soo diyaarsato ee ay la timaaddo ayaa la fulin doonaan halka markii hore aysan sidaa ahayn waxaana taasi ay muujinee in talaabo horay loo qaaday sanadihii ugu dambeeyay.